Ra'yiga Waxgaradka Qurbaha Ku Nool. - Cakaara News
Ra'yiga Waxgaradka Qurbaha Ku Nool.
Aniga oo ah Axmed Maxamed Xasan Ku magac dheer Aw-Masaib. Kuna hadlaya Magaca Odayaasha iyo Magaca Jaliyada DDS ee Canada Gaar ahaan Magalada Toronto, Canada.ayaan Waxaan ugu horayn salaan aad u qaali ah soo gaadhsinayaa Mudane Madaxwaunaha Abdi Maxamed Cumar iyo xukumada DDS Sidoo kalana isku-xidhnaanta iyo Wadatashiga Ay Wadajir gacmaha isugu Qabsadeen Xukuumada,Qaybaha Bulshada iyo Ciidamada gaarka ah ee Sugidii N/galyada uga gudbay ka Shaqaynta Horumarka.
Sidoo kale Waxaan salaam aad u qali ah soogarsinayaa dhaman Garaadada, Saladiinta, ugaasyada dhamaan odaydhaqameedka iyo shacbweynaha DDS ee Maqaamka fiican ka galay Sal u Dhigida Xasiloonida Udub-dhexaadna u noqday taageerada Xukuumadooda Maanta Gaadhay Kudayashada Isbedelada Xawliga ah ee Mudo gaaban uga taabogalay. Aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne Abdi Maxamed Cumar.
Dhanka kale waxaan ku faraxnay hadaanu nahay Waxgaradka,Aqoonyahanka iyo Qurbajoogta Reer Canadaba heerka ay DDSI gaadhay ee Muunada Hogaamineed,Isdhex-galka Qowmiyadaha,N/galyada iyo Horumarka Balaadhan ee ay Xukumada iyo shacabkuba gaadhsiiyeen Isbedelada Deegaanka waxaana Daliil u ah in markii 1aad Deegaanka lagu Qabto Xuska Qowmiyadaha Hidar 29 taasoo ay Xukuumada iyo Shacabku dadaalkooda buuxa ay galiseen maalinta aan marti galin doono dhamaan qoomiyadaha Ethiopia oo dhan.
Runtii waxaan u aragnaa in ay tahay maalin aad qaali u ah magic iyo taariikh fiicana u horsedi doonta deegaankena guud ahaan gaar ahaan casimada Jigjiga. Hadaan nahay Jaaliyada DDS ee ree Canada si buuxda ayaan u garab taaganahay hormarka,N/galyada,Maalgashiga iyo Maamulka Suuban ee ka Hano-qaaday Guud ahaan Deegaanka gaar ahaana Bilicda iyo Quruxda Magaalada Jigjiga.